Saraakiil Hor leh oo katirsan Al-Shabaab oo Malaayiin Dollar Madaxooda la dul saaray(Aqriso Magacyadooda) « AYAAMO TV
Saraakiil Hor leh oo katirsan Al-Shabaab oo Malaayiin Dollar Madaxooda la dul saaray(Aqriso Magacyadooda)
920 Views Date March 15th, 2014 time 7:02 am
Dowlada Mareykanka ayaa mar kale malaayiin Dollar waxa ay madaxooda dul saartay Saraakiil sar sare oo katirsan Xarakada AL-Shababa ,kuwaa oo la rumeesan yahay in ay kusugan yihiin qeybo kamid ah Soomaaliya.
Wasaarada Arrimaha Dibada Mareykanka War kasoo baxay ayaa lagu sheegay in Min Sadax Milyan oo Dollar Madaxooda la dul saaray Sadax Sargaal oo katirsan Xarakada Al-Shabaab.
Dowlada Maraykanka ayaana balan qaaday in Min Sadax Milyan oo Dollar la siin doono qofkii Xog Muhiim ah oo lagu dili karo ama lagu qaban karo ka keenta Sadaxdan Sargaal oo lagu kala Magacaabo Abdulkadir Mohamed Abdulkadir Cikrama, Jacfar iyo Yasin Kilwa.
Cabduqaadir Cikrama oo ah Nin Soomaali Kenyan ah ayaa loo heestaa in uu wax ka abaabulay Weerarkii Qasaaraha Badnaa ee Al-Shabaab ku qaadeen Suuqa Ganacsiga Westgate Mall ee Magaalada Nairobi, waxaa sidoo kale ninkan lagu eedeeyay Weeraro kale oo ka dhacay Kenya iyo in uu Dhalinyaro badan oo Kenyan ah u qoray Al-Shabaab.
Cikrama ayaa ka bad baaday Weerar Qorsheesan Dowlada Mareykanka ku dooneysay in ay ku disho ama ku qabato Bishii Octoper ee Sanadkii hore, Weerarkaa oo ka dhacay Magaalo Xeebeedka Baraawe .
Ninka Labaad ee Mareykanka lacagta dul dhigeen lama hayo Magaciisa oo Sadaxan, waxaana Magcaiisa lagu soo koobay Jacfar , waxaana la sheegay in Ninkan uu kuxigeen u yahay Cabduqaadir Cikrama .
Sargaalka sadaxaad ee Madaxsiisa lacagta ladul dhigay Waxaa Lagu Magacaabaa Yaasiin Kilwa , Ninkan ayaa la tilmaamay in uu yahay Amiirka Guud ee Shabaabka ka dagaalama Deegaanada Maamulka Puntiland.
Dowlada Mareykanka ayaa ku tilmaantay Sadaxdan Saragaal ee katirsan Al-Shabaab kuwa Qatar ah oo dambiyo kala duwan galay , waxa ayna u balan qaadeen qof kata oo gacan ka geesta dilka ama soo qabashada ragan in la siin doono Lacagta Min Sadaxda Milyan ee la dul saaray Madaxyadooda.